ပျေါပွူလာ ဖွဈလာတဲ့ မူပိုငျခှငျ့ ခြိုးဖောကျခွငျးနဲ့ အဲလကျဈရဲ့ music video မူပိုငျခှငျ့ အဲလကျဈ admin team တောငျးဆို – MC Tv Club
ပျေါပွူလာ ဖွဈလာတဲ့ မူပိုငျခှငျ့ ခြိုးဖောကျခွငျးနဲ့ အဲလကျဈရဲ့ music video မူပိုငျခှငျ့ အဲလကျဈ admin team တောငျးဆို
ပရိသတျကွီးရေ တဈခတျေတဈခါက နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ အဆိုတျော အဲလကျဈကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောကျပါဘူးနျော. အဲလကျဈကတော့ တဈကိုယျတျောစီးရီးမြား
အတှဲခှမြေားမှာပါရောကျအောငျမွငျခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ သီခငျြးတှကေတော့ လူငယျတှပေါးစပျဖြားမှာရပေနျးစားခဲ့ပါတယျ
အဆိုတျော အဲလကျဈ က အဆိုမှာသာအောငျမွငျရုံမကဘဲ တေးရေးမှာလညျး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ကိုအဲလကျဈ မှာ အမှာသားတဈယောကျ နှငျ့ သမီး တဈယောကျ ကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး လကျရှိမှာ မိသားစုနှငျ့ အေးခမျြးစှာဖွတျသနျးနတောပါ။
ကိုအဲလကျဈ ရဲ့ တေးသီခငျြးတှကေို ခဈြမွတျနိုးလို့ ပွနျဆိုသူတှရှေိသလို ကွျောငွာဆနျဆနျအမွတျထုတျသူမြားလညျးပေါမြားလာပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုအဲလကျဈ ရဲ့ Admin Team က သူ့ရဲ့ တေးသီခငျြးကို ကွျော ငွာဆနျဆနျအမွတျထုတျလိုသူတှအေတှကျ
ကိုအဲလကျဈရဲ့သီခငျြးမြားအားFacebook,Instagram, Tiktok နှငျ့ Youtube မြားပျေါတှငျ Commercial ဆနျဆနျ Cover သီခငျြးမြား အဖွဈ ပွနျလညျသီဆိုခွငျးမြားကို ခှငျ့ပွုလာမှာမဟုတျကွောငျး ထုတျပွနျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါတငျသာမကသီခငျြးမြားအားခှငျ့ပွုခကျြမရှိပဲLyrics Video ပွုလုပျခွငျး၊ Video Clips မြားတှငျ ထညျ့သှငျး အသုံးပွုခွငျး၊ ယခငျကရိုကျကူး ထုတျလှငျ့ပွီးသော Music Video မြားအား ပွနျလညျကူးယူတငျပွခွငျးမြားကို
ကိုအဲလကျဈရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြမရှိပဲ အသုံးမပွုကွပါရနျ ပနျကွားအပျပါကွောငျး ၊ကိုအဲလကျဈ ကို ခဈြခငျအားပေးလို့ ဝါသနာအရ ကိုယျတိုငျတီးခတျသီဆိုကွတဲ့ သီခငျြးခဈြသူပရိသတျမြားအတှကျ တော့ ဘာမှမပွောလိုကွောငျးထညျ့သှငျွးေပာကွားသှားပါသေးတယျ။
ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာတဲ့ မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်ခြင်းနဲ့ အဲလက်စ်ရဲ့ music video မူပိုင်ခွင့် အဲလက်စ် admin team တောင်းဆို
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အဲလက်စ်ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူးနော်. အဲလက်စ်ကတော့ တစ်ကိုယ်တော်စီးရီးများ
အတွဲခွေများမှာပါရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေကတော့ လူငယ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်
အဆိုတော် အဲလက်စ် က အဆိုမှာသာအောင်မြင်ရုံမကဘဲ တေးရေးမှာလည်း အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုအဲလက်စ် မှာ အမွှာသားတစ်ယောက် နှင့် သမီး တစ်ယောက် ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လက်ရှိမှာ မိသားစုနှင့် အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတာပါ။
ကိုအဲလက်စ် ရဲ့ တေးသီချင်းတွေကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ ပြန်ဆိုသူတွေရှိသလို ကြော်ငြာဆန်ဆန်အမြတ်ထုတ်သူများလည်းပေါများလာပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုအဲလက်စ် ရဲ့ Admin Team က သူ့ရဲ့ တေးသီချင်းကို ကြော် ငြာဆန်ဆန်အမြတ်ထုတ်လိုသူတွေအတွက်
ကိုအဲလက်စ်ရဲ့သီချင်းများအားFacebook,Instagram, Tiktok နှင့် Youtube များပေါ်တွင် Commercial ဆန်ဆန် Cover သီချင်းများ အဖြစ် ပြန်လည်သီဆိုခြင်းများကို ခွင့်ပြုလာမှာမဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်သာမကသီချင်းများအားခွင့်ပြုချက်မရှိပဲLyrics Video ပြုလုပ်ခြင်း၊ Video Clips များတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်း၊ ယခင်ကရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်ပြီးသော Music Video များအား ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြခြင်းများကို
ကိုအဲလက်စ်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အသုံးမပြုကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါကြောင်း ၊ကိုအဲလက်စ် ကို ချစ်ခင်အားပေးလို့ ဝါသနာအရ ကိုယ်တိုင်တီးခတ်သီဆိုကြတဲ့ သီချင်းချစ်သူပရိသတ်များအတွက် တော့ ဘာမှမပြောလိုကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါသေးတယ်။
Previous Article အရမျးတှလေိုကျဖကျနတေဲ့ အေးမွတျသူနဲ့ကြျောထကျအောငျတို့ရဲ့ စုံတှဲပုံလေးတှေ
Next Article သူတဈပါးကို ဆျောကားခဲ့တဲ့ လငျးလငျး ဝဋျလညျပွီ